Johanne Masowe church leaders gather congregants to tell them to stop gathering - NewZimbabwe.com Johanne Masowe church leaders gather congregants to tell them to stop gathering - NewZimbabwe.com
Johanne Masowe church leaders gather congregants to tell them to stop gathering
CHURCH leaders at the Johanne Masowe eChishanu Apostolic sect in Harare Friday gathered hundreds of followers to tell them to stop attending service in line with a government ban on public gatherings earlier this week.
The ban was a pre-emptive measure against the outbreak of the deadly coronavirus in the country.
Madzibaba Silvester, the leader of the Johanne Masowe eChishanu, which congregates at the Coca Cola open area along the Harare-Chitungwiza road, on Friday told congregants not to attend the regular Friday gatherings anymore until the rampaging disease is tamed.
“We have decided to heed the President’s call because we have to follow what the government tells us to do. So, right now, we only gathered here so that we tell our congregants on the new developments,” said Madzibaba Silvester.
“Our church members come from different areas so we had to congregate today so that we can break the news to those who did not know about this and then we leave.”
“We understand that Coronavirus has killed many people all around the world and it is our duty as the people of Zimbabwe and as church leaders to abide by the rules set by our government which is why we are here today, we pray that this pandemic will end soon,” said Madzibaba Wellington.